Bahrain: “Vehivavy Mafy Toy Ny Vy Ny Vehivavintsika” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Septambra 2012 6:20 GMT
@esraa_f_84: Aleo izy hijery. Rehefa hariva ny andro, tsy manana afa-tsy izay eo anatrehany ihany izy [ny vadiny]. Ahavita inona moa izy raha mijery azy ireo fotsiny? Angaha izy andeha hitsidika azy ireo na koa hoe hivoaka ny fahitalavitra angaha ireo hankeo aminy?
@Fatim_Sam: Mahatanty dona kokoa ny vehivavy Bahraini. Vehivavy mafy toy ny vy ireo.